မွနျမာ့တပျမတျောကို တရားစှဲရနျ စဉျးစားသငျ့ – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 26, 2019 May 4, 2019 kyaw zaw oo
မွနျမာ့တပျမတျောကို တရားစှဲရနျ စဉျးစားသငျ့
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တရားစွဲရန် စဉ်းစားသင့်
၁။ လက္ကာရွာကနေ ဖမ်းသွားတဲ့ အ​ယောက်​နှစ်​ဆယ်​​ကျော်​ မှာ သုံးဦးဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုအတွင်းရှိနေစဉ် ဆယ့်တစ်ရက်အတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။ သေဆုံးမှုတွေဟာ ရောဂါကြောင့်မို့လို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေလို့၊ ဆေးစွဲသူ ဆေးပြတ်လို့ စသည်အားဖြင့် တပ်မတော်ဘက်က အကြောင်းပြပါတယ်။
၂။ သေဆုံးသူတွေရဲ့ အလောင်းကို မိသားစုတွေ မတွေ့လိုက်ရဘဲ မီးသဂြိုလ်ပစ်လိုက်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ မီးသဂြိုလ်မှုမလုပ်ခင်မှာ သေမှုသေခင်း အမှုဖွင့်တာ၊ မှုခင်းဆရာဝန် စစ်ဆေးချက်ယူတာတို့ကို သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်သွားခဲ့တယ်။ မှုခင်းဆရာဝန်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို လုံးဝမသိရသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအရ သေဆုံးသွားသူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းမှာ အညိုအမဲစွဲနေတဲ့ ပြင်ပဒဏ်ရာတွေ တွေ့နေရတယ်။
၃။ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တိုင်ပင်သလောက် မြန်မာ့တပ်မတော် (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဟာ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ လူသတ်မှုတွေ နဲ့ အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ တွေးဆချက်ကို ကျွန်တော့်ကို ပြောကြတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဖွင့်မပြောလည်း မြင်သာနိုင်တဲ့ ကိစ္စ ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ သက်သေပြနိုင်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒါကို စွပ်စွဲသူ၊ တရားစွဲသူတွေကို အငြိုးအတေးကြီးစွာနဲ့ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေနဲ့ လက်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ သဘောရှိတယ် လို့ သုံးသပ်ကြတယ်။
၄။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ရသေ့တောင်မြို့နယ်ထဲက ရေစိုးချောင်း နဲ့ အမျက်တောင်ကြားမှာ ကူးတို့လှေသမားကို တပ်ကလှမ်းပစ်လို့ သေသွားတာ တစ်ရွာလုံးမျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ရွာလုံး မျက်မြင်ဖြစ်သွားတာကိုတောင်မှ ရဲစခန်းသွားပြီး အမှုဖွင့်ပါ ဆိုတာတောင် တောသူတောင်သားတွေက အရမ်းကြောက်လို့ အမှုမဖွင့်ရဲဘူး။ ခံရတဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အမှုမဖွင့်ရင် ဖြစ်စဉ်ကို စေ့စေ့ငုငု ရဲစခန်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်အောင်မလုပ်ထားရင် သေသူတက်ပြေးတဲ့ ရွာမှာ သူပုန်တွေ ရှိနေတယ်တို့ ဘာတို့ စသည်ဖြင့် မဟုတ်တမ်းတရား နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာဖွယ်ရာ ရှိကြတာကို ဆင်ခြင်ပြီး အမှုသွားဖွင့်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ အေအေဟာ တိုက်ပွဲကနေ ဆုတ်ရင်းနဲ့ ရဲတပ်ရင်းကနေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေကို အခြေအနေသာတာနဲ့ မှဲ့တစ်ပေါက်မစွန်းစေပဲ ချက်ချင်းပြန်ပို့ခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကတော့ အဲသည် ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ အနီးအနား လက္ကာရွာက လက်နက်မဲ့ လူနှစ်ဆယ်ကျော်ကို ဖမ်းခေါ်သွားတာ ဆယ့်တစ်ရက်အတွင်းမှာ သူတို့လက်ထဲမှာ သုံးယောက်သေတယ်။ မိသားစုက အလောင်းတောင် မတွေ့လိုက်ရဘူး။
၆။ အလောင်းကို မိသားစုနဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက မတွေ့လိုက်ရဘဲ မီးသဂြိုလ်လိုက်တာနဲ့ အလောင်းမှာ အညိုအမဲစွဲနေတာတွေကို အခြေခံထည့်တွက်ပြီး လူသတ်မှု၊ အလောင်ဖျောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ တပ်မတော်ကို တရားစွဲဆိုဖို့အရေးကို မြောက်ဦးဒေသခံ အသိုက်အ၀န်းရဲ့အကူအညီနဲ့ ကာယကံရှင်မိသားစုတွေက လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းကို အလေးအနက် တင်ပြတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ရ။ တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ (မင်းထင်ကိုကိုကြီး ပြောသလို အရင်ကထက် ပိုပြီးကြည်ညိုလာတာ) ကို အဖတ်ဆယ်ရန် အလို့ငှာ တပ်မတော်ဟာ မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အမှားအယွင်းတွေ ရှိတတ်တဲ့သဘောကို ၀န်ခံခြင်းနဲ့ စတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့မှာ အပြစ်မရှိပါ ဆိုတာကို ပြနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် တရားစွဲခံသင့်တယ်။ တရားစွဲခံနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိဖို့အတွက် အရှက်တရားလည်း လုံလောက်နေဖို့ လိုပါတယ်။
၈။ ကူးတို့သမား ပစ်သတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ ရဲစခန်းမှာ အမှုသွားဖွင့်တော့ ဘာဖြစ်လာမလဲ . . . ? ၊ ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး ဆိုတာကို ကြိုသိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် အောက်ဆုံးထစ် လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း လက္ကာသေဆုံးသူ သုံးဦးရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက်၊ အခုလက်ငင်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းမလာနိုင်ပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်လည်ရရှိလာမယ့် တရားမျှတမှုအတွက်၊ မသေပဲ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အကျဉ်းသမားတွေရဲ့ အသက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်၊ အခြားအရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးရာမှာ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်စာပဲဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် . . . ဒီဖြစ်စဉ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တရားစွဲဖို့ကိစ္စကို အလေးအနက် ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြသင့်ပါတယ်။
၉။ တချို့ ကာယကံရှင်မိသားစုတွေဟာ ဖုန်းလေးတစ်လုံးတောင် မရှိနိုင်ကြတဲ့ နွမ်းပါးသူတွေ လို့ ကြားသိရတယ်။ ကာယကံရှင်မိသားစုတွေရဲ့ ညိုးငယ်သော လက်ရှိစိတ်ထားကို နားလည်ပါတယ်။ မြောက်ဦး ဒေသခံအသိုက်အ၀န်းကလည်း ကျွန်တော် အခုပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေအပြင် ကျွန်တော် မသိနိုင်တဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေလည်း ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြိးတော့ သတ္တိလေးမွေးပြီးတော့ တရားစွဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်/ မစွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ (၂၆) ရက်
၁။ လက်ကာရှာကနေ ဖမျးသှားတဲ့ အ​ယောကျ​နှဈ​ဆယျ​​ကြျော​ မှာ သုံးဦးဟာ မွနျမာ့တပျမတျောရဲ့ ခြုပျနှောငျမှုအတှငျးရှိနစေဉျ ဆယျ့တဈရကျအတှငျး သဆေုံးသှားခဲ့ကွတယျ။ သဆေုံးမှုတှဟော ရောဂါကွောငျ့မို့လို့၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျသတျသလေို့၊ ဆေးစှဲသူ ဆေးပွတျလို့ စသညျအားဖွငျ့ တပျမတျောဘကျက အကွောငျးပွပါတယျ။
၂။ သဆေုံးသူတှရေဲ့ အလောငျးကို မိသားစုတှေ မတှလေို့ကျရဘဲ မီးသဂွိုလျပဈလိုကျတယျ လို့ သိရပါတယျ။ မီးသဂွိုလျမှုမလုပျခငျမှာ သမှေုသခေငျး အမှုဖှငျ့တာ၊ မှုခငျးဆရာဝနျ စဈဆေးခကျြယူတာတို့ကို သိုသိုသိပျသိပျ လုပျသှားခဲ့တယျ။ မှုခငျးဆရာဝနျရဲ့ မှတျခကျြကို လုံးဝမသိရသေးဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဓါတျပုံတှအေရ သဆေုံးသှားသူတဈယောကျရဲ့အလောငျးမှာ အညိုအမဲစှဲနတေဲ့ ပွငျပဒဏျရာတှေ တှနေ့ရေတယျ။
၃။ ကြှနျတျော မိတျဆှတှေနေဲ့ တိုငျပငျသလောကျ မွနျမာ့တပျမတျော (သို့မဟုတျ) မွနျမာ့တပျမတျောရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈရပျဟာ ဒီဖွဈစဉျမှာ လူသတျမှုတှေ နဲ့ အလောငျးဖြောကျဖကျြမှုတှကေို ကြူးလှနျခဲ့တာ ဖွဈနိုငျဖှယျရှိတယျ ဆိုတဲ့ တှေးဆခကျြကို ကြှနျတေျာ့ကို ပွောကွတယျ။ ဘယျသူကမှ ဖှငျ့မပွောလညျး မွငျသာနိုငျတဲ့ ကိစ်စ ပေါ့လေ။ ဒါပမေဲ့ သကျသပွေနိုငျဖို့ အရမျးခကျခဲတယျ။ ဒါကို စှပျစှဲသူ၊ တရားစှဲသူတှကေို အငွိုးအတေးကွီးစှာနဲ့ ပုဒျထီး ပုဒျမတှနေဲ့ လကျတုံ့ပွနျနိုငျတဲ့ သဘောရှိတယျ လို့ သုံးသပျကွတယျ။
၄။ ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးက ရသတေ့ောငျမွို့နယျထဲက ရစေိုးခြောငျး နဲ့ အမကျြတောငျကွားမှာ ကူးတို့လှသေမားကို တပျကလှမျးပဈလို့ သသှေားတာ တဈရှာလုံးမကျြစိရှမှေ့ာ ဖွဈသှားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုတဈရှာလုံး မကျြမွငျဖွဈသှားတာကိုတောငျမှ ရဲစခနျးသှားပွီး အမှုဖှငျ့ပါ ဆိုတာတောငျ တောသူတောငျသားတှကေ အရမျးကွောကျလို့ အမှုမဖှငျ့ရဲဘူး။ ခံရတဲ့ ကိုယျ့ဘကျက အမှုမဖှငျ့ရငျ ဖွဈစဉျကို စစေ့ငေု့ငု ရဲစခနျးမှာ မှတျတမျးဝငျအောငျမလုပျထားရငျ သသေူတကျပွေးတဲ့ ရှာမှာ သူပုနျတှေ ရှိနတေယျတို့ ဘာတို့ စသညျဖွငျ့ မဟုတျတမျးတရား နောကျဆကျတှဲတှေ ဖွဈလာဖှယျရာ ရှိကွတာကို ဆငျခွငျပွီး အမှုသှားဖှငျ့လိုကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
၅။ ဧပွီလ (၁၀) ရကျနမှေ့ာ အအေဟော တိုကျပှဲကနေ ဆုတျရငျးနဲ့ ရဲတပျရငျးကနခေျေါဆောငျသှားတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမိသားစုတှကေို အခွအေနသောတာနဲ့ မှဲ့တဈပေါကျမစှနျးစပေဲ ခကျြခငျြးပွနျပို့ခဲ့တာကို တှရေ့တယျ။ မွနျမာ့တပျမတျောကတော့ အဲသညျ ဧပွီလ (၁၀) ရကျနေ့ တိုကျပှဲဖွဈစဉျတှရေဲ့ အနီးအနား လက်ကာရှာက လကျနကျမဲ့ လူနှဈဆယျကြျောကို ဖမျးချေါသှားတာ ဆယျ့တဈရကျအတှငျးမှာ သူတို့လကျထဲမှာ သုံးယောကျသတေယျ။ မိသားစုက အလောငျးတောငျ မတှလေို့ကျရဘူး။
၆။ အလောငျးကို မိသားစုနဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးက မတှလေို့ကျရဘဲ မီးသဂွိုလျလိုကျတာနဲ့ အလောငျးမှာ အညိုအမဲစှဲနတောတှကေို အခွခေံထညျ့တှကျပွီး လူသတျမှု၊ အလောငျဖြောကျဖကျြမှုတှနေဲ့ တပျမတျောကို တရားစှဲဆိုဖို့အရေးကို မွောကျဦးဒသေခံ အသိုကျအဝနျးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကာယကံရှငျမိသားစုတှကေ လုပျဆောငျသငျ့ကွောငျးကို အလေးအနကျ တငျပွတိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
ရ။ တပျမတျောရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ (မငျးထငျကိုကိုကွီး ပွောသလို အရငျကထကျ ပိုပွီးကွညျညိုလာတာ) ကို အဖတျဆယျရနျ အလို့ငှာ တပျမတျောဟာ မိမိအဖှဲ့အစညျးအတှငျးမှာ အမှားအယှငျးတှေ ရှိတတျတဲ့သဘောကို ဝနျခံခွငျးနဲ့ စတငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိတို့မှာ အပွဈမရှိပါ ဆိုတာကို ပွနိုငျဖို့အတှကျ မွနျမာ့တပျမတျောအနနေဲ့ ရဲရဲရငျ့ရငျ့ တရားစှဲခံသငျ့တယျ။ တရားစှဲခံနိုငျတဲ့ သတ်တိရှိဖို့အတှကျ အရှကျတရားလညျး လုံလောကျနဖေို့ လိုပါတယျ။
၈။ ကူးတို့သမား ပဈသတျခံရတဲ့ကိစ်စ ရဲစခနျးမှာ အမှုသှားဖှငျ့တော့ ဘာဖွဈလာမလဲ . . . ? ၊ ဘာမှ ဖွဈမလာဘူး ဆိုတာကို ကွိုသိကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တရားမြှတမှုအတှကျ အောကျဆုံးထဈ လုပျနိုငျတဲ့အလုပျကို လုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး လက်ကာသဆေုံးသူ သုံးဦးရဲ့ တရားမြှတမှုအတှကျ၊ အခုလကျငငျး အကြိုးဖွဈထှနျးမလာနိုငျပမေယျ့ နောငျတဈခြိနျမှာ ပွနျလညျရရှိလာမယျ့ တရားမြှတမှုအတှကျ၊ မသပေဲ ကနျြရှိနသေေးတဲ့ အကဉျြးသမားတှရေဲ့ အသကျကို တတျနိုငျသမြှ ကယျတငျနိုငျဖို့အတှကျ၊ အခွားအရပျသားတှကေို အကာအကှယျပေးရာမှာ ကောကျရိုးတဈမြှငျစာပဲဖွဈဖွဈ အထောကျအကူ ဖွဈနိုငျဖို့အတှကျ . . . ဒီဖွဈစဉျမှာ မွနျမာ့တပျမတျောကို တရားစှဲဖို့ကိစ်စကို အလေးအနကျ ၀ိုငျးဝနျးစဉျးစားကွသငျ့ပါတယျ။
၉။ တခြို့ ကာယကံရှငျမိသားစုတှဟော ဖုနျးလေးတဈလုံးတောငျ မရှိနိုငျကွတဲ့ နှမျးပါးသူတှေ လို့ ကွားသိရတယျ။ ကာယကံရှငျမိသားစုတှရေဲ့ ညိုးငယျသော လကျရှိစိတျထားကို နားလညျပါတယျ။ မွောကျဦး ဒသေခံအသိုကျအဝနျးကလညျး ကြှနျတျော အခုပွောတဲ့ အခကျြအလကျတှအေပွငျ ကြှနျတျော မသိနိုငျတဲ့ အခွားအခကျြအလကျတှလေညျး ရှိနဦေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးကို ခွုံငုံသုံးသပျပွိးတော့ သတ်တိလေးမှေးပွီးတော့ တရားစှဲတာပဲ ဖွဈဖွဈ/ မစှဲတာပဲဖွဈဖွဈ အကောငျးဆုံး ဆုံးဖွတျလုပျဆောငျကွဖို့ ကြှနျတျောမြှျောလငျ့ပါတယျ။
၂၀၁၉ ဧပွီလ (၂၆) ရကျ
Previous “မငျးကောငျးမငျးမွတျ” တညျး ဟူသော အယူအဆ
Next မွနျမာ့ လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ နဲ့ ပတျသကျလို့ မှတျခကျြစကား
Myanmar Now ပါ သတငျးနှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ မှတျခကျြ
ဆုမြှျော ဘကျဂကျြမြှျော ဘာသာတရား